कम्युनिष्ट भनेको ज्ञान, संस्कार र चरित्रमा विशेषता हासिल गर्नु होः उपाध्याय
काठमाडौं । राजनीति गर्ने कुरा नेपालमा कसैलाई राजनीतिमा यथार्थमा गंभीर चॉसो छ भने उसले राजनीतिमा पैसा र करप्सनको खेललाई कसरी निर्मूल गर्न सकिन्छ ? त्यसमा अनुसंधान गरी जुक्ति निकालेर सत्ता सम्हाल्नुपर्छ । अनि मात्र मुलुकको कायापलट हुनेछ । भ्रष्टाचारबिना राजनीति चल्न सक्दैन भन्ने सोचका वर्तमान राजनीतिक पुस्ता एवं राज्य संचालकबाट यो संभव छैन ।
दलहरूको घोषणा पत्रमा उल्लेखित कुरा जसले जिते पनि हारे पनि लागू गरे भैहाल्छ । सबैले राम्रै गर्छु भनेकै हुन्छन् । आफूले नजिते पनि जित्नेलाई सहयोग गरे पुग्छ देश बनाउने हो भने । हारेमा गरिन्न किन भन्नुपर्यो र ? जिताएमा मात्र गर्छु किन भन्नुपर्यो र ? आखिर गर्ने त विज्ञ र कर्मचारीहरूले न हो, नेताले त शिलान्यास र उद्घाटन गर्न टुपल्किने हो ।
यिनै अहिलेकै नेताहरूको नेतृत्वका विगतका सरकारहरूले न हो हालसम्मका १५ वटा पन्चवर्षिय योजना पास गरेका, तिनमै यति धेरै कुस्त योजना छन् कि ती मात्र पूरा गर्न पनि यी नेताहरूका नातिसम्मलाई हम्मे पर्ने छ । थप नयॉ कुरा चाहिएकै छैन् किन बक्नुपर्थ्यो र । १५ औं योजना यसरी पूरा गर्छु मात्र भनुन् र गरून् , अनि त्यस पछि जनताले स्वयं मुल्यॉकन गरिहाल्छन्।
कम्युनिस्ट दल क्याडरबेस्ड हुने गर्छ । दल प्रवेश गरेपछि अनुशासन र प्रशिक्षणबाट खारिएपछि मात्र क्रमशः उच्च जिम्मेवारीको सोपान चढ्दै जाने हुन्छ । कम्युनिष्ट भनेको ज्ञान, संस्कार र चरित्रमा विशेषता हासिल गर्नु पनि हो । कसैलाई मत दिदैमा वा कुनै सिद्धान्त मन पराउदैमा कम्युनिस्ट हुनु हैन । नेपालमा कम्युनिष्ट बन्न जो जसले पनि पाउने भएको छ( न विगतको योगदान चाहिने, न संघर्ष र न चरित्रवान् हुनुपर्ने । त्यसैले नेपालमा कुनै दल पनि कम्युनिष्ट हैनन्, ब्र्याण्डिंग वा ट्यागिंग मात्र हो । कुन ट्याग र ब्र्याण्ड मन पर्छ रोज्ने रोजाउने मात्र हो ।
अरू मासबेस्ड लोकतान्त्रिक दल भनाउदाहरूको त झन् कुरा गरिसाध्य छैन। तिनका धून जसरी भए पनि पद पड्काउ, सत्तामा पुग र घूस खाउ पैसा कमाउ अनि मोज गर१ राज्यसत्ताको सबै अंगमा सेटिंग मिलाउ र महालुट सुनिश्चित गर ।
म चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बन्ने भएको भए नेपालका सबै दलका सबै घोषणा पत्रहरूमा उल्लेख सबै राम्रा संभव बिकासे बाचाहरू पूरा गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्न थालिहाल्थें । सबैका घोषणाहरू जहिले पनि उस्तै एकसे एक राम्रा देखिन्छन् । विगत १५ वटा पन्चवर्षिय योजनामा र विगत २९ आर्थिक वर्षमा यिनै दलहरूका सरकारका बजेट भाषणमा गरिएका सबै पूरा हुन बॉकी बाचाहरू फटाफट पूरा गर्दै जान्थें, बिरोध गर्ने बिषय नै खलास् । तर, गर्ने हात र सोच्ने दिमागको बिकल्प छैन। तीब्र विकास गर्ने सबै मुलुकमा मेरिटोक्रेसी हुने गरेको छ ।-लेखक नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् ।
https://www.corporatenepal.com/2019/11/148026/ १८ कार्तिक २०७६, सोमबार
राजा महेन्द्रले दह्रो पारेको कर्मचारीतन्त्रलाई संघीयताले ध्वस्तै पार्यो
गरिबी हटाउने नाममा ल्याएका अर्बाैका कार्यक्रममा आर्थिक अपराध भैरहेको छः उपाध्याय
काम नगर्ने आयोजना प्रमुखलाई हटाउन दुई बर्ष कुर्नुपर्छ भन्ने छैन्ः पुन
'पूर्वजले गरेको कामलाई आफूले गरें भनेर नेताहरुले इतिहासमाथि बलात्कार गर्ने गरेका छन्'
कार्य सम्पादन करारको औचित्य छैन्, तत्काल बन्द गर्नुपर्छः उपाध्याय